Abavelisi kunye nabaxhasi bezilwanyana zasekhaya | Umzi mveliso wase China Pet Nail Clippers
Isikere sePetil yezinja ezinkulu
1. Isikere sezilwanyane zezinja ezinkulu kuyamangalisa ukuba kulula ukusisebenzisa, ukusika kucocekile kwaye kuchanekile, kwaye banqumla ngqo ngoxinzelelo oluncinci.
2. Iibhloko ezikule clipper zinako 't yoba, ukrwele okanye umhlwa, kwaye iya kuhlala ibukhali emva kokunqunyulwa, nokuba inja yakho ineenzipho eziqinileyo. Isikere sezikhonkwane zezinja ezinkulu zinomgangatho ogqwesileyo osisinyithi osisinyithi, oya kuthi unike amava okusika abukhali anamandla kwaye ahlale ixesha elide.
3. Izibambo ezingatyibilikiyo zikulungele ukubanjwa. Ithintela isikere sesikhonkwane sezinja ezinkulu ukutyibilika kwezinja.
Pet Nail Clipper kunye yokucheba
I-1.Pet Nail Clipper kunye ne-Trimmer enesixhobo esomeleleyo sokusikwa kwentwasahlobo kwinyathelo lokusika elifanelekileyo.
2. Isitshixo sokhuseleko, yenza isilungisi sesikhonkwane sesilwanyana sasekhaya kunye nesicheme kwindawo evaliweyo xa singasetyenziswa.
3. Ukubamba kwe-ergonomic kuyilelwe ukubumba ergonomic ukujikeleza isandla sakho ukuze wandise intuthuzelo kunye nokusebenziseka okulula kunceda ukunqanda ukusikeka kwenzipho ngengozi. Zibambe nje ngesiqhelo njengoko usebenzisa uxinzelelo.
4.Xa zingasetyenziswanga, i-Pet Nail Clipper kunye ne-Trimmer inokutshixwa ngamacangci kwindawo evaliweyo. Awuyi kuzisika ngengozi xa uyikhupha kwidrowa.